Ny tombony ataon'ny mpikaroka ECN momba ny mpandraharahan'ny mpandraharaha manara-penitra | FXCC
Forex ECN Trading Modèl vs Fixed Spread Forex Broker Trading
Noho izany, inona ireo fahasamihafana misy eo amin'ny mpikarakara ECN / STP ary ny mpikarakara ny birao, izay antsoina matetika hoe "mpanamboatra tsenam-barotra"? Nanangona tabilao tsotra sy fiatrehana tsotra izahay, mba hanoroana ireo hevi-dehibe amin'ny ECN / Mpikarakara ny STP sy ny birao / birao fanaovana varotra, saingy nieritreritra izahay fa afaka nandeha an'io kilaometatra fanampiny io ihany koa izahay mba hanazavana ny fahasamihafana amin'ny antsipiriany bebe kokoa.
Modely momba ny varotra ECN
Fixed Broker Broker Platform
Amin'ny mpivarotra sehatra fifanakalozam-barotra varotra, ny mpivarotra dia mahafantatra ny toeranao misokatra, ny varotra varotra ary ny tetika ary afaka mampiasa ity vaovao ity ho tombontsoany.
Ao amin'ny FXCC ECN, afaka mandany vola avy hatrany amin'ny vidin'ny fitarihan-draharaha ara-bola ianao.
Ireo fanononan-teny ireo dia mahazatra amin'ny fivarotana nentim-paharazana. Tsy manonona ny FXCC. Ny teknolojian'ny seha-pifaneraserana sy ny fifanarahana sarotra momba ny vidin-javatra / fotoana dia natao mba hamenoana ny varotrao amin'ny vidin'ny tsena ankehitriny.
Ny FXCC dia tsy mandray toerana amin'ny mpanjifany mihitsy.
Varotra nandritra ny famoahana ara-toekarena
Ny FXCC dia ahafahan'ny mpividy rehetra tsy miankina ny habetsaky ny varotra amin'ny varotra ho an'ny varotra ary mametraka baiko vaovao mandritra ny famoahana ny famatsiam-bola. Mandritra ireo famoahana ireo, ary indraindray tsy dia mahazatra ny tsenam-barotra tsy dia mahazatra loatra, dia betsaka lavitra noho ireo izay azo ampiasaina mandritra ny "tsena" ara-barotra.
Iza avy ny mpivarotra anao?
Na inona na inona karazana mpivarotra izay heverinao ho toy ny: part-time, fotoana feno, na hobbyista ary na inona na zava-niainanao dia misy fifandanjana izay ampiharina amin'ny varotra, izay manan-danja amin'ny mpivarotra vaovao, ho an'ny traikefa matihanina; Toe-tsaina matihanina amin'ny fifampiraharahana foana no mandresy. Ny mpihatsaravelatsina dia tokony, na inona na inona ny traikefa ara-barotra, dia manatona ny famaizana ny varotra miaraka amin'ny fahazotoana sy ny matihanina.
Ny fifidianana ny mpividy mahitsy no tena manan-danja
Ny karazana broker mifidy anao dia fanapahan-kevitra matanjaka, izay hisy fiantraikany lalina eo amin'ny mety hahombiazanao. Tokony hisafidy mpikarakara birao iray ve ianao, sa tsy misy mpikarakara birao? Safidy tsotra sy fanontaniana izany, ary ny iray dia hamaly avy hatrany. Mpivarotra marobe, izay nanangana fomba fijery matihanina sy fomba fiasa, dia tokony hifidy ny modely amin'ny ECN / STP isaky ny mandeha ary hanasongadina ny antony sasany.
Voalohany indrindra, ny ankamaroan'ny mpivarotra FX dia mpivarotra na mpanodikodina androany - ny varotra izay mety haharitra segondra, minitra, na ora maromaro, ireo mpihazakazaka FX dia mahalana no mihazona ny FX raharaham-barotra amin'ny alina. Noho izany dia tokony ho fanapahan-kevitra tsotra ny hanapahana raha toa ka mihamitatra kokoa ianao, fa mandoa iraka iray isaky ny varotra miaraka amin'ny broker ECN / STP, mifanohitra ny fielezany ary (ara-toekarena) mandoa vola.
Ny mpivarotra am-bavany no "manamboatra", ny tsenany manokana. Izy ireo dia afaka manonona ny vidin'ny fitaovam-pandaharana manokana (arakaraka ny lisitry ny fepetra takiny) izay mety hampidirina amin'ny fomba manjavozavo ny liquidity, arakaraka ny habetsaky ny orinasam-pandraharahana ataon'izy ireo amin'ny anaran'ny mpanjifany. Noho izany, ny teny filazan'izy ireo dia fanamarihana artificial.
Ny fielezan'ny birao dia mamoaka matetika, izay mety hahasarika raha toa ka manatsonga ny fielezan'ny fifehezana, ohatra, ny pipa iray amin'ny EUR / USD. Na izany aza, ny mpihazakazaka dia mety hiafara amin'ny fahantrana sy ny tsy fahampian-tsakafo, izay midika fa ny zava-misy dia nofenoina lavitra ny tena vidin'ny tsena fa ny fihenana dia akaiky kokoa ny roa, na telo pips amin'ny fifanakalozana. Ny mpikarakara ny birao manokana dia afaka manemotra ihany koa ny famenoana ny filaminana amin'ny fiezahana hahazo ny vidiny tsara indrindra ho an'ny mpividy.
Na dia izany aza, ny fahasamihafana lehibe indrindra amin'ny fifampiraharahana mpikarakara ny birao sy ny mpikarakara ECN / STP dia ny zava-misy ireo mpikarakara ny birao mifandraika amin'ny mpividy. Raha toa ka mandresy ny mpividy ny birao, dia tapaka ny mpividy, dia milefitra amin'ny mpanjifa izy ireo. Amin'izao fotoana izao dia azo atao ny manipika hevitra fa ny antontan-taratasin'ny birao dia tsy miandany amin'ny zava-mitranga, ny zava-misy dia mitoetra fa ny mpikarakara birao iray dia manao toerana hikatsaka tombony raha toa ka very ny mpanjifa.
Miaraka amin'ny modely ECN / STP dia miovaova ny fielezany, arakaraka ny fepetra ara-barotra marina amin'ny fotoana rehetra sy ny teny nomeny avy amin'ny mpamatsy vola; Manana banky lehibe sy andrim-panjakana izay mandray anjara amin'ny tambajotra nomerika elektronika. Mpivarotra nandoa saram-pivarotana madinika isan-tsokajy ary matetika dia tsy misy sazy henjana. Miaraka amin'ny broker ECN / STP izy ireo dia lasa tetezana, fitarihana eo amin'ny mpivarotra sy ny tsena. Ny mpihazakazaka dia tonga hatrany amin'ny tsenambarotra amin'ny alàlan'ny toeram-pivarotana elektronika izay tsy misy barazy, tsy misy fanelingelenana ary tsy misy fitsabahana. Ny vidiny dia avy amin'ny tambajotra, ny dobo famokarana liquidite noforonin'ireo mpandray anjara.
Miaraka amin'ny modely ECN / STP dia tsy misy intsony ny famerimberenana indray, ny didy rehetra dia feno ny vidiny tsara indrindra amin'ny fotoana rehetra. Indraindray ireo teny notsongaina ireo dia mety ho tena sarobidy be, ambany kely noho ny ampahany kely amin'ny pip, angamba 0.1 miankina amin'ny habetsahan'ny asa ao amin'ny ECN ary mitondra antsika amin'ny tombontsoa lehibe hafa amin'ny varotra amin'ny ECN / STP broker; ny halalin'ny tsena.